Burger King wuxuu sameeyay magac bixin buuxda | Abuurista khadka tooska ah
Burger King's "rebrand" cusub waa ode si loo ogaado midabada
ka midabada kaalinta ayaa qaaday bartamaha sanadihii la soo dhaafay waana laga yaabaa inay tahay sababahan awgood in Burger King uu sameeyay "magac" magacooda si uu nooga tago anaga oo aad ula yaaban sida wanaagsan ee ay u isticmaaleen habkaas fahamka naqshadeynta ee hooska iyo shaqooyinka kale ee farshaxanku aysan ku habboonayn.
Waana shirkaddaas mas'uul ka ah keenista cuntadaas caanka ah ee degdegga ah Kuwaas oo masuulka ka ah inay wax ka keenaan xarumahooda, waxay ku jiraan hawsha keenista heesaha muuqaalka ah ee astaanteeda.
Dabcan, midabadaas fidsan sida udubka dhexe, retro-ku wuxuu dib ugu soo muuqanayaa sawirro taxane ah oo ina tusaya taabashada weyn ee xitaa naqshadeynta nooc cusub oo "geesinimo leh" taasi waxay qaadataa magac weyn.
Waa inaan sidoo kale ku darnaa taas palette midab gaar ah Taas oo si toos ah noo geynaysa maskaxda maskaxda ee 70s (haa filimadaas sida Easy Rider).
La Hay'ada Jones Knowles Ritchie ayaa mas'uul ka ah "magac bixinta" ka timid Burger King, oo waxay la timid baakado cusub, naqshadeynta liiska, baayacmushtarka, qurxinta iyo xitaa wax kasta oo la xiriira warbaahinta bulshada.
Iyo kuwa waa dhowr sano jir, Astaantan cusubi waxay si aad ah isugu egtahay tii Burger King ee 1969 kii. Marka waxaan helnay astaan ​​cusub oo ay labada erey ku jiraan nuxurka hamburger-ka oo aad ugu hodansan muuqaalka isla markaana la joogaya labadiisa midab ee astaanta u ah.
Buluuggii hore wuu baaba'ayaa waxaanan aadeynaa baakad cusub oo noocaas ah "psychedelic" si runta loo sheego, wax badan ayey ku dhufatey Burger King. Fartaasi waa «Olol» waxaana ku dhiirrigeliya isla muuqaalka muuqaalka ee suxuuntiisa astaanta u ah.
ka midabada fidsan ayaa Burger King dib ugu celisa 70-meeyadii si aan u rabno inaan ugu tagno maqaaxiyohooda ama aan wax uga dalbanno guriga si aan maalmahan barafka ugu qaadanno qeybahan. Sanad uu Burger King soo maray soo jeedinno xiiso leh sida waji-galkaas...
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Dhiirrigelinta » Burger King's "rebrand" cusub waa ode si loo ogaado midabada
Kuwani waa furayaasha muuqaalka iyo hal-abuurka ee 2021 sida ku cad Adobe
App si aad wax uga beddesho sawirrada: kuwani waa kuwa ugu fiican